UNICEF si ay u siiso Midowga Afrika 220 Milyan oo ah tallaalka J&J COVID-19
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Guddiga Dalxiiska Afrika » UNICEF si ay u siiso Midowga Afrika 220 Milyan oo ah tallaalka J&J COVID-19
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Waajib ah • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Heshiiska u dhexeeya UNICEF iyo Janssen Pharmaceutica NV ayaa gacan ka geysan doona hirgelinta Ballanqaadka Hormarinta Hormarinta (APC) ee ay kala saxiixdeen hay'adda African Vaccine Acquisition Trust (AVAT) iyo Janssen bishii Maarso ee sannadkan.
Janssen Pharmaceutica NV si ay u siiso ilaa 220 milyan oo qaadasho oo ah tallaalka hal-qaadashada ah ee J&J ee dhammaan 55-ka Dal ee xubnaha ka ah Midowga Afrika dhamaadka 2022.
Heshiisku wuxuu hubiyay ikhtiyaar ah in lagu dalbado 180 milyan oo kale, taas oo keenaysa marin u helista ugu badan ee wadarta 400 milyan oo qiyaasood ah dhamaadka 2022.
Tallaalka Janssen ee COVID-19 wuxuu helay liistada Adeegsiga Degdegga ah ee WHO bishii Maarso 12 waxayna ku tiirsan tahay shabakad sahay caalami ah soo saarta tallaalka.
UNICEF ayaa heshiis la saxiixatey Janssen Pharmaceutica NV qiimaha saamiga ee shirkadda US dollar si loo siiyo illaa 220 milyan oo qaadasho oo ah tallaalka hal-tallaalka ah ee J&J ee dhammaan 55-ka Dal ee xubnaha ka ah Midowga Afrika (AU) dhammaadka sannadka 2022. Ilaa 35 milyan oo qiyaasood ayaa la bixinayaa dhammaadka sannadkan.
Heshiiska dhexmaray UNICEF iyo Janssen Pharmaceutica NV ayaa gacan ka geysan doona hirgelinta Ballanqaadka Hormarinta Hormarinta (APC) ee ay kala saxiixdeen hay'adda African Vaccine Acquisition Trust (AVAT) iyo Janssen bishii Maarso ee sanadkan. Heshiiskaas wuxuu xaqiijiyey ikhtiyaarka in la dalbado 180 milyan oo kale, oo keenista ugu badan ee wadarta ah 400 milyan oo qiyaasood ah dhammaadka 2022.
Midowga Afrika wuxuu aasaasey AVAT bishii Nofeembar 2020 si uu u gaarsiiyo qaaradda Afrika tallaalada COVID-19, iyada oo ujeedadu tahay in la tallaalo boqolkiiba 60 dadka ku nool dal kasta oo ka tirsan Midowga Afrika. Qorshaha, Bangiga Dhoofinta iyo Soo dejinta Afrika (Afreximbank) iyo AVAT waxay saxiixeen heshiis iskaashi oo ka wakiil ah Midowga Afrika oo loogu talagalay horumarinta Qaabdhismeedka Ballanqaadka Hormarinta (APC) ee lagu taageerayo Waddamada Xubnaha ka ah helitaanka tallaallada COVID-19. UNICEF waxay soo iibin doontaa oo gaarsiin doontaa tallaallada COVID-19 iyadoo wakiil ka ah barnaamijka AVAT. Wada-hawlgalayaasha kale waxaa ka mid ah Xarunta Afrika ee Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (Afrika CDC) iyo Bangiga Adduunka. In kasta oo tallaallo badan la filayo inay qayb ka noqdaan faylalka qorshaynta, tallaalka hal-qaadka ah ee Janssen ayaa ah kii ugu horreeyay ee lagu daro.
“Wadamada Afrika waa inay helaan helitaan jaban oo sinaan ah oo loogu tala galay tallaalka COVID-19 sida ugu dhakhsaha badan Helitaanka tallaalku wuxuu ahaa mid aan sinnayn oo aan caddaalad ahayn, iyadoo in ka yar 1 boqolkiiba dadka ku nool qaaradda Afrika ay hadda ka tallaaleen COVID-19. Tani ma sii socon karto, ”ayay tiri Agaasimaha Fulinta ee UNICEF, Henrietta Fore. "UNICEF, oo leh taariikhdeeda dheer ee gaarsiinta tallaallada adduunka oo dhan, waxay taageertaa dadaallada tallaalka caalamiga ah ee COVID-19 iyada oo loo marayo AVAT, COVAX, iyo wadiiqooyin kale si loo kordhiyo sahayda iyo helitaanka tallaallada."
Iyada oo ka faa'iideysanaysa tobanaan sano oo waayo-aragnimo ah tan ugu weyn ee iibsata tallaalka adduunka oo dhan sida sannad kasta loogu sameeyo tallaalka caadiga ah, UNICEF waxay u shaqeyneysaa sidii wakaalad soo iibsi iyo saad iyadoo ka wakiil ah iskaashiga AVAT. UNICEF waxay diyaar u tahay inay fududeyso soo iibinta, daabulida iyo keenida talaalada isla marka la helo isla markaana Dowladaha xubnaha ka ah AU ay diyaar u yihiin inay helaan. Iyada oo leh awood balaaran iyo khibrad tobanaan sano ah oo ku saabsan maaraynta xamuulka, caymiska iyo daabulida talaalada oo u baahan in si adag loogu hogaansamo shuruudaha silsiladda qabow, UNICEF waxay la shaqeyn doontaa warshadaha tallaalka, soo gudbiyayaasha xamuulka iyo shirkadaha gaadiidka si ay u helaan qiyaasaha bulshada u baahan.